“आखिर किन पुगे प्र’चण्ड ज’नताको घर घरमा?:: Mero Desh
“आखिर किन पुगे प्र’चण्ड ज’नताको घर घरमा?
Published on: ३१ चैत्र २०७७, मंगलवार ००:५७
चितवन। केहि समय अगाडी प्रचण्डले काठमाण्डौं छाडेर अब जनताको घरमा जाने घोषणा गरेका थिए। उसैको निरन्तरता स्वरुप ने’कपा माओवा’दी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड गृहजिल्ला चितव,न पुगेका छन्। अध्यक्ष प्र’चण्डले आइतबार भरतपुर म’हानगर पालिका वडा नम्बर २२ बोटे टोलमा रहेको लोपउन्मुख बोटे जाति को घर अवलोकन गरेका छन्।”
चितवन महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल अर्थात छोरी सँगै अध्यक्ष प्रचण्ड बोटे जातिको घर अवलोकन गर्न पुगेका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे टोलको अवलोकनसँगै उक्त टोलका स्थानीय जनताको घरमा खाना खाएका थिए।
र केहि भलाकुसारी समेत गरेका थिए। उनले भनेका थिए अब शहर छाडेर गाँउ फर्कने र जनताको विचमा रहने।
यो पनि हेर्नुस् भिडियो हेर्न सिधै तल समचारको अन्तिममा जानुहोस् काठमाडौं २९ चैत्र । प्रमुख प्र’तिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत,नेकपा एमाले नेता केशब ब’डालबीच पत्रकार ऋषि धमलाको जनता जान्न चाहन्छन् का’र्यक्रममा च’र्काचर्की परेको छ। आज राति प्रसारण भएको कार्यक्रम मा ने’ताद्धय बस्नेत र बडालबीच चर्काचर्की परेको हो ।
“भिडिओको ३५ मि’नेटमा पत्रकार धमलाले प्र’धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै काम त गर्नु भएको छ नि ? भनेर आफ्नो कुरा राख्छन् । ध’मलाको जिज्ञासा भुईँमा खस्न नपाउँदै नेता बस्नेतले जवाफ फर्काए-“काम गर्नुभएको छ भन्या, वा’ईडबडी किनेर ल्यायो ? ख्वाप्प । चार अर्बको हिसाबकिताब छैन् ।”
यत्तिकैमा एमाले नेता बडालले नेता बस्नेतलाई फ’टाहा कुरा गरिराखेको दा’बी गर्छन् । तर, बस्नेत झनै आ’क्रामक रुपमा प्रस्तुत भए । उनले तुरुन्तै जवाफ फर्काए-“तपा’ईँ चोर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । ब’ढि कुरा गर्ने ? के शब्द प्रयोग गरेको ? सम्हालिएर बो’ल्नुहोस । फ’टाहा भन्ने ? त्यसो नभन्नुहोस ।”
उता, ब’डालले भने विनम्र भएर तपाईँले असत्य बो’ल्नु भएको छ भनेर जवाफ फर्काउँछन् । तर, बस्नेत झनै आ’क्रमक रुपमा प्रस्तुत हुँदै भन्छन् “फटाहा किन भन्छस ? सा’ले, डा’का, दे’शद्रोही कम्युनिष्ट । फेरि ब’डाल बोल्न खोज्छन् । तर, ब’स्नेतले ‘चुप’ भन्दै कडा रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् । श्रोत रिपोर्टरस् नेपाल भिडियो अर्को समचारको मुनि छ।